Muuse Biixi Waa; Fadhiidku kufitaanka ma daayo, Hooyadiina Habo madeeyso; kaasi waa muuse bihi; bye fuaad maxamed qawdhan london
Sunday September 29, 2019 - 20:57:02 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Maog tahey akhrisoow ;ilamaha yar, ee fadhi barradka ahi ma daayo kufitaanka , hooyadiina ma deeyso soo habo; taas waxaa ka dhigan muuse biixi.
muuse bulshada weyn ee somaliland waxeey u taqannaa inuu inuu yahey , nin mucagagga oo kaligii taliye ah , oo aan cidna dhageeysan, oo walliba dagaal oogaa, (2 sano oo dhodhow buu uu muuse uu tallada dalka heyey, labadaa sano somaliland waxaay gashey halkii ugu liitatey ee tariikhda somaliland (ABID) ay soo marto, illaa xiligii engriiska.
Muuse biixi; waxuu noqdey walee madaxweynihii ugu baal madowabaa ee soo mara somaliland, waxuu dalkii galiyeey qabylaad collaaad dalkii oo kalla xidhan bari iyo galbeed, isla markaana barigii somalilnd bulshada ku nool waxuu ku beerey collaad dhaqala xumo , waxbrasho laan
xitaa ciidanka qaranka somaliland waxaa uu galiyeey shaki badan oo uu isaga iyo odaga badowga ah taani aay ku kalla rideen ciidanka qarrana, dhanka kale.
Burco waxii bari ka xiga wax babuur oo ganacsiyi ma taggaan, waxaas oodhan wuu ugu talla galley, anigu magaranayo waxuu ka waada ama waxii faaiido ugu jiirra arinkaas, waa tuug beenaale ah, oo xanuusanaya, qofka maskaxda ka wallan waxaa lagu gartaa , si khaldan buu wax u wadda ama u fakirraa, ilaa uu dad kalla qabiye mooyaane maba gamo habeenkii.
Tusaale ahaan, markuu hadlaayo qud badiisa waxaa u dhigaa , in uu bulshada somaliland qaarkood ka dhigto cadow, taas baa idiin ah markhaati cad ee aad wadda og tihiin, maan sheeeg dadka la cuna dalka ama ku tageera qabiiil.
Hadaba dalka somaliland hadii uu sidaaas ku sii socdo ama ninkan wallan ee muuse biixi aad qurraan saari weydaan i walaahi meel wallan dalku ku dabeen doono.
waxaasna waxaa ugu wacan oo uu maqlaa 4 nin oo tajiira oo ku yidhaada dalka sidaan dooneyno u maamul, 4 taasna waxaa kamidda.
3) ina awosiciid
4) iyo islaanta uu qabo madaxweynaha jabuuti.
Hadaba anigu waxaan u sheegayaa ineey been ku noolyihiin somaliland anigaa iska leh talllada illaaheybaana shaqeeysa, somaliland walahi inaan ugga tageen 4 tajiira iyo muuse biixi.
waxaa qorrey fuaad maxamed qawdhan arimaha bulshada